မာလာရှမ်းကောကို အရသာပုံမှန်ဈေးတန်တန်နဲ့ စားချင်သူများအတွက် Shwe Spicy – FoodiesNavi
By yin sandi On November 2, 2018 0
Review တွေကြည့်ကြည့်ပြီး သွားစားနေကြတဲ့ခေတ်ကြီးထဲမှာ မင်မင်တစ်ယောက်လည်းအပါအဝင်ပါ။ ? တစ်ဆိုင်သွားစားတော့မယ်ဆိုတာနဲ့ ရီဗျူးတွေမွှေနှောက်ရှာရင်း သွားမယ်မသွားဘူးဒွိဟဖြစ်ရတာလည်းအမောပါပဲ ? ရီဗူးတွေအတိုင်းမှန်နေရင် ပျော်ရွှင်ဝမ်းသာရပေမယ့် တလွဲကြီးဖြစ်နေရင် အလိုမကျဖြစ်တတ်တာမို့ ? ကိုယ်ချင်းစာတဲ့အနေနဲ့ မင်မင်စားခဲ့ဆိုင်လေးကိုလည်း Honest Review လေးပဲပြောပြပေးချင်ပါတယ်။ မင်မင်သွားစားခဲ့တဲ့ဆိုင်လေးကတော့ ရေကျော်လမ်းမကြီးပေါ်က “Shwe Spicy”ပါ။ ဒီဆိုင်လေးက စမ်းချောင်းထဲမှာတစ်ဆိုင် ၊ တာမွေ Ocean မှာတစ်ဆိုင်ရှိပေမယ့် အိမ်နဲ့နီးတဲ့ဆိုင်မှာပဲစားဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။
ဆိုင်ကအရမ်းကြီးမကျယ်ဘဲ နည်းနည်းလှောင်နေသလိုဖြစ်တာနဲ့ ဆိုင်အပြင်ဘက်ရထားသံလမ်းဘေးမှာ ခင်းကျင်းထားတဲ့ သစ်ပင်ပုလေးတွေမှာထိုင်ဖြစ်တယ်။ သိသိသာသာသတိထားမိတာတော့ ဝန်ထမ်းတွေကပြုံးပြုံးပြပြမရှိဘူးရယ်။ ကိုယ်လည်းအစားအသောက်ကောင်းဖို့ပဲ အရေးကြီးပါတယ်လေဆိုပြီး စိတ်ထဲခဏထုတ်ထားတယ်။ Spicy Foods တွေရောင်းတာဆိုတော့ မာလာရှမ်းကောအဓိကမှာစားဖြစ်တယ်။ အမယ်တွေတော့တော်တော်လေးစုံတယ် အသားအိုးတွေဆို အဖုံးအုပ်ထားပြီးလာမှဖွင့်ပေးတော့ ပိုပြီးသန့်သလိုခံစားရတယ်။
မာလာရှမ်းကောရဲ့အရသာပိုင်းကတော့ သိပ်မထိမိလှဘူး။ ? အစပ်အထုံပုံမှန်မှာတယ်ဆိုပေမယ့် ခေါက်ဆွဲတောင်အကုန်အရောင်မပြောင်းလောက်အောင် အရသာစိမ့်ဝင်မှုနည်းနည်းအားနည်းပါတယ်။ ဝက်သုံးထပ်သားနဲ့ ဝက်ဂုတ်သားကတော့ ရေလည်လတ်ဆတ်တယ်။ အိအိဖတ်ဖတ်လေးနဲ့ ဝါးလိုက်တိုင်းအရသာစိမ့်ထွက်နေတော့ လတ်ဆတ်မှန်းတအားသိသာတယ်။ အသားလုံးဘာညာအကုန်ကောင်းတယ်။ မာလာရှမ်းကောအနှစ်နည်းသွားလို့ထင်တယ်။ ပုံမှန်အရသာလောက်ထွက်ပေမယ့် အရမ်းကြီးကောင်းတဲ့အထဲမပါတာတော့ အသေအချာပဲ။ ဈေးနှုန်းတွေကတော့ တခြားဆိုင်တွေထက်အများကြီးပိုသက်သာတယ်။ ဒီတော့ မာလာရှမ်းကောကို အရသာပုံမှန်လေးနဲ့ ဈေးသက်သက်သာသာစားချင်သူတွေအတွက် ဒီဆိုင်လေးကကွက်တိပဲ။
ကြက်ခြေထောက်ချဉ်စပ်ကတော့ တော်တော်လေးအဆင်ပြေတယ်။ တစ်ခါပြင်မီးစာလေးထည့်ပြီး ဆူပွက်အောင်လုပ်ပေးထားတော့ ပူပူနွေးနွေးလေးဖြစ်နေရော။ အမွှေးအကြိုင်ရနံ့သင်းသင်းလေးနဲ့ ကြက်ခြေထောက်နူးနူးလေးလေးထဲ ချဉ်ငံစပ်အရသာဝင်သလို ဟင်းရည်လေးတွေသောက်လိုက်ရင်လည်း ရှူးရှူးရှဲရှဲနဲ့အခိုးပွင့်သွားမှာအသေအချာပဲ။ အရသာကလည်း ထိထိမိမိလေးဆိုတော့ သောက်ရတာလျှာပေါ်စွဲပြီး ခံတွင်းတော်တော်လေးရှင်းတယ်။
ကင်းမွန်မာလာကတော့ ဂျပန်တို့ဟူးလိုအဖတ်လေးတွေကို မျှစ်ပုံစံလှီးထားတာတွေနဲ့ ရောချက်ထားတာ။ ဒါလေးလည်းမီးစာလေးနဲ့ပဲဆိုတော့ ပူပူနွေးနွေးမဖြစ်မှာတော့ စိတ်မပူရဘူး။ အစပ်အရသာပိုများပေမယ့် စားလို့ခံတွင်းတွေ့တဲ့အထဲပါတယ်။ ကင်းမွန်ပါတာတော့နည်းတယ်ပြောရမယ်။
ဝက်သားကင်လေးတော့ခိုက်မိတယ်။ အိအိဖတ်ဖတ်လေးနဲ့ ဝါးလိုက်တာနဲ့ချိုမြမြလေးတွေခံစားရတော့ တော်တော်ကြီးကိုမိုက်တယ်။ Platng ပိုင်းကိုစမြင်တော့ အာ့လောက်တောင်ကောင်းလိမ့်မယ်မထင်ထားဘူးရယ်။ Pating နဲ့ဆွဲဆောင်မှုကတော့ တော်တော်လေးညံ့တယ်ပြောရမယ်။ စားကြည့်လိုက်တော့မှ အသားလတ်ဆတ်တာအတော်ကြီးသိသာနေတယ်။ ခြောက်ခြောက်ကြီးလည်းဖြစ်မနေဘဲ စိုစိုအိအိလေးဆိုတော့ ပိုပြီးစားလို့ကောင်းတယ်။
အစပ်တွေချည်းပဲမှာစားတာဆိုတော့ Milk Tea လေးသောက်ကြည့်ခဲ့တယ်။ ပုလဲသီးလေးတွေနဲ့ဆိုတော့ ပုလဲသီးလေးတွေကို တထုပ်ထုပ်ဝါးရင်း ချိုချိုမွှေးမွှေးလေးသောက်လိုက်တော့ ရင်ထဲအေးပြီး အစပ်တော်တော်ပြေတယ်။ လက်ဖက်ရည်လိုဖန်တဲ့ဓာတ်လည်း အများကြီးမပါတော့ ရင်မတုန်ဘဲ တော်တော်လေးသောက်လို့ကောင်းတယ်။
ခြုံပြောရမယ်ဆိုရင် မာလာရှမ်းကောကို ရှယ်ဖိုင်းတာမျိုးစားချင်ရင်တော့ ဒီဆိုင်လေးကအရမ်းမပြေလှဘူး။ ပုံမှန်အရသာမျိုးနဲ့ ဈေးသက်သာတာစားချင်ရင်တော့ ဒီဆိုင်မှာစားကြည့်ပါ။ မီနူးမှာပြထားတဲ့စီချွမ်းစတိုင်ငါးဆိုတာကြီးလည်း မရသေးဘူးဆိုတော့ သိပ်တော့မမိုက်ဘူးရယ်။ Service ကတော့ညံ့တဲ့အထဲပါတယ်။ မင်မင်သွားစားတဲ့ဆိုင်လေးကတော့ ရေကျော်လမ်းမကြီးပေါ် City Mart အကျော်က ၊ ရထားသံလမ်းဘေးကပ်ရပ်မှာပါ။
In Reviews Tagged mala xiang guo Leaveacomment
တုတ်ထိုးအစုံအလင်ကိုမှ အရသာကောင်းကောင်းဈေးတန်တန် စားချင်သူများအတွက် ?
ညချမ်းအေးအေးလေးမှာ BBQ ပူပူနွေးနွေးလေးကင်စားကြရအောင်